Mafaro eZimbabwe Part 2, Branches: The KTO Project explores Chimurenga music and beyond! — ASHKENAZ
Tickets are $20 Advance /
The second of 2 concerts will feature Zimbabwean mbira music played with modern amplified instrumentation and drum kit, with lyrics characterized by social and political commentary. The performance will feature arrangements and song by Kelly Takunda Orphan and Zivanai Masango, The KTO Project’s Zimbabwe-born guitar player who has made his mark touring with Zimbabwean master musicians Oliver Mtukudzi and Thomas Mapfumo.
Both concerts (the first on April 19th) will feature Voices of Zimbabwe, the community chorus led by Kelly Takunda Orphan, developed in residence at Ashkenaz (that will run from February to April 2018). Members of the Zimbabwean, Southern African and World Music choral communities have a chance to participate in this choral project that will be featured at the Mafaro eZimbabwe: Zimbabwean Mbira Music for the People concerts.